कलसेन्टर सुसाइड | Martech Zone
मङ्गलबार, जनवरी 15, 2008 सोमवार, जुलाई 11, 2016 Douglas Karr
शनिबार, हामी एक कल सेन्टर र हाम्रो ग्राहकहरु को साथ काम गरे। मसँग त्यो अस्पष्ट थियो, पेटको भावना छ कि यो राम्रोसँग जान सक्दैन। मेरो पेट ठीक थियो।
जबकि हामीसँग हाम्रो एप्लिकेसन पूर्ण र संसाधनहरू महिनौंसम्म निष्क्रिय रह्यो, कलसेन्टरले केहि पनि छोएन। हामीसँग एक डेमो थियो र केवल तिनीहरूका विकासकर्ताले देखाए। ग्राहकले कलसेन्टर बोलायो र तयार हुन के चाहियो सोध्यो। हामीले कलसेन्टरमा कल गरेका थियौं कि तिनीहरू तयार छन् कि छैनन्। प्रत्येक पटक कलसेन्टर कर्मचारीले हामीलाई विश्वास दिलाए कि उनीहरूलाई केहि हप्ता मात्र चाहिन्छ।
जब तपाइँ दुवै समय र संसाधनहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, लिनुहोस्।
लाइभ हुनु भन्दा केही दिन अघि, उनीहरूले अनुप्रयोगमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ जुन हामीले स्ल्याम उत्पादनमा गर्नुपर्दछ। एक दिन हामी प्रत्यक्ष हुनु अघि, उनीहरूले परिक्षण गरे र हामीले समस्याहरू पत्ता लगायौं slam। हामीले तिनीहरूलाई एक दिउँसो भित्र स्थिर गर्यौं।
हाम्रो ग्राहकको आँखामा, पक्कै पनि, दुई पक्षहरू आपसमा मिल्दथे। पहल तिनीहरूको कल सेन्टर थियो + हाम्रो सफ्टवेयर। शनिबार हामीले केहि दिन ढिला गरी सुरू गर्‍यौं - यो यो थियो जब वास्तविक रमाईलो शुरू भयो। केन्द्रमा तत्काल प्रतिक्रिया असभ्य, अव्यावसायिक र ढिलो थियो - ग्राहकहरूबाट, हामीबाट होइन।
हामीले तुरुन्तै कम्पनीसँग केही ट्राइज बैठकहरू बोलायौं र फोहोर उड्न थाल्यो। अद्यावधिकहरूका लागि अनुरोध पछि अनुरोध पछि खारेका महीनाहरू बेवास्ता गरियो, र कल सेन्टरबाट फोकस भनेको राजस्व मोडेलले काम गरेन। तिनीहरू $ x / कल चार्ज गर्दै थिए - तर कल धेरै लामो समय लाग्यो, तिनीहरूले पैसा गुमाउने थिए। तिनीहरूले पूर्वानुमान गरिएको खण्डमा अज्ञानता जाहेर गरे, कलको जटिलताको बारेमा गुनासो गरे, र ग्राहकको अवास्तविक मागहरूको बारेमा कुरा गरे।
अझै, तिनीहरू व्यावासायिकसँग सहमत भए, क्षतिपूर्तिमा सहमत भए र समयसीमा सहमत भए।
गुनासो नगर्नुहोस् पछि तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ!
तिनीहरूले सबै बसको मुनि फाल्ने र आफ्नो अक्षमताको रक्षा गर्ने प्रयास गर्ने निर्णय गरे। यो फोन कल को माध्यम बाट बसेर निराशाजनक थियो जहाँ तिनीहरुले घाम मुनि सबै कुराहरुलाई दोष दिए। वास्तविक समस्याको रूपमा चलिरहेको बेइमानीको साथमा (अगाडि कामको विश्लेषण नगर्दै र उनीहरूको स्टाफ राम्रोसँग तयार नगर्दै) तिनीहरूले तल्लो बाटो रोजे। सबैभन्दा खराब कुरा, तिनीहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो गुनासो प्रसारण गर्ने निर्णय गरे पछि असफलता, सट्टा सुरु हुनु भन्दा पहिले। तिनीहरूको अन्तिम रक्षा सरल थियो, अर्थशास्त्रले जोड दिएन। तिनीहरू प्रत्येक कलबाट नाफाको लागि पर्याप्त मात्रामा गरिरहेका थिएनन्।
कलसेन्टरले त्यो बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्थ्यो प्रति कल लागत ग्राहकको लक्ष्य होईन, प्रति कल राजस्व छ।
यो एक धेरै सरल समाधान हो, हैन? राम्रो तपाईले आफ्नो स्टाफलाई तयार गर्नु त्यति नै सक्षम छ कल प्रबन्धनमा। उनीहरू कल कल प्रबन्धन गर्न राम्रो छ, ग्राहकलाई उकास्ने उत्तम, उनीहरूले प्रस्तुत गरिरहेको व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् र सम्भाव्यता भन्दा बढि उनीहरू कल बन्द गर्न सक्षम हुनेछन्। यदि कलले लामो समय लिन्छ भने ग्राहक त्यहाँ भुक्तानी गर्न इच्छुक हुन सक्छ यदि त्यहाँ सापेक्ष राजस्व छ। लागत कल सेन्टरको समस्या हो, उपचार अधिक राजस्व हो।
हामीले सोध्यौं के हामी सहयोग गर्न सक्दछौं। एउटा सिफारिश अनुप्रयोगमा केहि अतिरिक्त कार्यक्षमता थप्नु थियो। दुर्भाग्यवश, विकासको समय बिल्कुलै निष्क्रिय भएको थियो।
आज, हामी टोलीलाई प्रशिक्षणको लागि अतिरिक्त समय प्रदान गर्न कल सेन्टर बन्द गर्‍यौं। तिनीहरू अझै पनी कल प्रति बढी पैसा मा आग्रह गर्दै छन्। उनीहरूले चिन्नु पर्छ कि तपाईले अधिक पैसा माग्नु अघि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नु सार्थक हुन सक्छ। ग्राहकले तिनीहरूलाई दोस्रो मौका दिइरहेको छ, म आशावादी छैन उनीहरूले यसको राम्रो उपयोग गर्नेछन्।
हामी पहिले नै विकल्पहरूमा काम गरिरहेका छौं।
टैग: कल केन्द्रकल सेन्टरप्रति कल राजस्व
वेबसाइटहरू क्रोनको साथ तालिकाबद्ध कार्यहरू चलाउन सक्दछन्
जनवरी 16, 2008 मा 9: 13 एएम
Gotta love that। बताउन सक्दिन मलाई कति पटक यस्तै परिस्थितिको सामना भयो। तपाईं कोसिस गर्नुहोस् र मद्दत गर्न कोशिस गर्नुहोस्, तर अन्तमा तिनीहरू मद्दत लिन चाहँदैनन् जतिञ्जेल सम्म ढिलो र विगत हुने छैन।
जनवरी 20, 2008 मा 2: 35 एएम
कल सेन्टरले धेरै माग गर्दछ विशेष गरी जब यो टेक्नोलोजीको लागि आउँदछ। एप्लिकेसन प्रोग्राम केवल एक चीजको आवश्यक छ ... :)